9 Ruvara Powder Rongedza Yakasviba Blush Palette & Contour Kugadziridza Bhodhi, Kurutivi Kumeso Kuratidzira Powder Makeup Yakareba-Inopenya Inopenya Makeup Kunyange Ganda Tone Kuchekesa Mateki.
Chekutanga one:Perfect Retouch: Nekushandisa iyo matanhatu-mavara blush palette pane chirebvu, masaya, uye mhino, iwe unogona nyore kugadzira iyo yakavezwa kutaridzika, ikubatsire iwe kugadzirisa kusakwana kwechiso uye nekuwedzera kumeso kwechiso, uye wedzera kubwinya kune ako akasiyana-siyana ekuzora anotaridzika.
Iyo yakapfava-ku-kusanganisa uye inogara-kwenguva refu mameseji anogona kunge akapeputswa guruva pamusoro pemapuro ematama ekunyepedzera kumhanya, kana kuvakwa kuti uwane iyo inoshamisa uye ine pigmented pop yemuvara.Kupa iko kusununguka kweupfu uye kugadzirwa kwekirimu.
Chechipiri chekutanga:Mashandisiro aungaita: Uchishandisa yakavezwa kumeso bhurasho, tsvaira bronzer pamatama, mativi emhino uye chirebvu kugadzira iyo contours. Nyorera kutsva kumaapuro pamatama, uye uasanganise kumusoro uye kumusoro kune nzeve kune kupenya kwechisikigo.
Gadzira yakasarudzika-tarisa ine satin kubata kumatama Inopa huwandu hweperekisi yepinki pakuonekwa kwakapora
Wedzera pop ine ruvara pamatama
Yakakwana pakushandiswa kwezuva nezuva, zviitiko zvakakosha kana zviitiko nezvimwewo ese maumbirwo.Sehunyanzvi, yemuchato makeup, mabiko ezvekupfeka kana zvemaoko makeup.
JOYO ine zvaunoda kuti ugadzire chero hwaro hwekutaridzika, mumvuri weziso, bhurasho rekugadzira, vanovanza uye vanosimbisa kuti vagadzire hupenyu hwakanaka.
Chekutanga vatatu:Transparent makeup, light and silky, indulgent modern, play a very good cosmetic modification role, is an important choice for European and American lovers of beauty, to create a “sexy mature system” (utsinye-husina runako).
Chechina chekutanga:Kavha - isina kabhodhi kadhibhokisi ine 9 mavara ekutsvaira, yega pani saizi ndeye 3.65 cm * 3.65 cm. Yakakwira mhando, iri nyore kushandisa. Yakakodzera kwazvo kushandiswa kwehunyanzvi kana kushandiswa kwezuva nezuva.
Yekurota - yakapfava, yakatsetseka uye yakasanganiswa zvakanaka. Anti mutsetse uye anti kusvibisa. Inokodzera kwazvo maartist maartist uye chero munhu anoda kuyedza akasiyana mavara eepake-up powder pachinzvimbo chekushandisa mari wega kutenga hwaro.
Zvimiro - unounza kupenya kwechisikigo uye kune hutano kune chero ruvara rweganda, runogona kupfekwa roga kana rakapetwa kuti riwedzere kudzika uye simba. Ipa yakajeka, echisikigo mavara. Shandisa yakajeka pigment kuti usanzwe kunzwa kunorema.
Ruvara - hunyanzvi akateedzana ezvekugadzira-up, 9 marudzi eakajeka mameseji, anorega iwe uchibva kune rakasviba ganda. Iyi yeku-gadzira 9 ruvara kumeso Blush Powder inoita kuti ganda rinyoro uye rinozorodza, zvakasikwa uye zvine hutano kubwinya.
Yakanaka - yakakwana yeMake-up / yakasarudzika make-up / Yemuchato make-up, etc. Vodisa Face blush ichakubatsira iwe kukwezva vanhu vazhinji kumafaro kana dzimwe nhambo. Mavara akasiyana siyana aunosarudza kubva.
Pashure: Maziso ekugadzira maziso-BD15-DW
Zvadaro: Meso ekugadzira-BD-CH
Yakanakisa Blush Brush
JOYO © All Kodzero Dzakachengetedzwa. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Mini Lipstick, Matte Eyeshadow Palette, Ndarama Ziso Makeup, Yakanakisa Cream Eyeshadow, Yakanakisa Makeup Brushes, Shimmer Lipstick, Zvese Zvigadzirwa